ဖြိုးမြတ်အောင်ကို ရွှေရင်ထိုးနှင့် ဂုဏ်ပြုသည့်စုံတွဲ...
မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲဝင် ဖြိုးမြတ်အောင်ဟာ ပရိသတ်တွေကြား အလွန်ရေပန်းစားနေတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့အပြင် ယနေ့ ဇာတိမြေ ဟင်္သာတကိုပြန်တဲ့အချိန်မှာလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ သောင်းသောင်းဖြဖြကြိုဆိုခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။
နောက်တစ်ပတ်မှာကျင်းပမယ့် မြန်မာအိုင်ဒေါဖိုင်နယ်ပွဲအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့သူတွေအထဲမှာ ဖြိုးမြတ်အောင်အပါအဝင် သူ့ပရိသတ်တွေလည်း ပါဝင်မှာပါ။
ဝင်းနားဖြစ်ဖို့ရေပန်းစားနေပေမယ့်လည်း မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်အတွက်တော့ ကြိုးစားမှုသာလျှင် နံပါတ် တစ် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်လာမှာပါ။
အောင်မြင်လာတာနဲ့အမျှ နောက်ကြောင်းအတိတ်တွေနဲ့ လိုက်လံတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်း ခံနေရတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်တစ်ယောက်ဟာ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကို သိပ်ပြီး အလေးမထားပဲ ရှေ့ဆက်သွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။
ပရိသတ်တွေ အခိုင်အမာကိုရရှိထားတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်တစ်ယောက်ကတော့ ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင် ဇနီးမောင်နှံရဲ့ ဂုဏ်ပြုခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။
အဲဒါကတော့ ရွှေသားစစ်စစ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်ရဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ်7ပုံစံကို ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်ချီးမြှင့်ပေးခဲ့တာကို Myanmar Beauty Stars ပေ့ခ်ျပေါ်မှာ ယနေ့ ညနေပိုင်းက တင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုပို့စ်အောက်မှာတော့ ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်ချီးမြှင့်ပေးခဲ့တဲ့ ဇနီးမောင်နှံ (၂) ဦးလည်း လာရောက်ကောမန့်ပေးထားတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
ယခုလိုဖြိုးမြတ်အောင်ကို ချစ်ခင်အားပေးပြီး ဂုဏ်ပြုချီးမြင့်ခဲ့တဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေက ချီးကျူးသြဘာပေးလျှက်ရှိနေကြတာကိုလည်း အဆိုပါ ပို့စ်အောက်မှာတွေ့ရပါတယ်။
ဖြိုးမြတ်အောင်ကို ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်ချီးမြင့်ပေးခဲ့တဲ့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ အမည်တွေကတော့ ကိုကျော်သူထိုက် နဲ့ မမို့မို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့ ခရမ်းသုံးခွစိန်ရွှေရတနာဆိုင်ကို မြောက်ဒဂုံ၊ ပင်လုံလမ်းမပေါ်မှာဖွင့်လှစ်ထားရှိတာဖြစ်ပါတယ်။
ဖြိုးမြတ်အောင်ပရိတ်သတ်တွေရှိရင်လည်း Share ပေးကြပါဦးနော်
Credit – hotnew
မွနျမာအိုငျဒေါပွိုငျပှဲဝငျ ဖွိုးမွတျအောငျဟာ ပရိသတျတှကွေား အလှနျရပေနျးစားနတေဲ့ ပွိုငျပှဲဝငျတဈဦးဖွဈတဲ့အပွငျ ယနေ့ ဇာတိမွေ ဟင်ျသာတကိုပွနျတဲ့အခြိနျမှာလညျး ပရိသတျတှရေဲ့ သောငျးသောငျးဖွဖွကွိုဆိုခွငျးကိုခံခဲ့ရပါတယျ။
နောကျတဈပတျမှာကငျြးပမယျ့ မွနျမာအိုငျဒေါဖိုငျနယျပှဲအတှကျ စိတျလှုပျရှားနကွေတဲ့သူတှအေထဲမှာ ဖွိုးမွတျအောငျအပါအဝငျ သူ့ပရိသတျတှလေညျး ပါဝငျမှာပါ။
ဝငျးနားဖွဈဖို့ရပေနျးစားနပေမေယျ့လညျး မမြှျောလငျ့ထားတဲ့ ဖွိုးမွတျအောငျအတှကျတော့ ကွိုးစားမှုသာလြှငျ နံပါတျ တဈ အရေးကွီးဆုံးဖွဈလာမှာပါ။
အောငျမွငျလာတာနဲ့အမြှ နောကျကွောငျးအတိတျတှနေဲ့ လိုကျလံတိုကျခိုကျမှုတှကေိုလညျး ခံနရေတဲ့ ဖွိုးမွတျအောငျတဈယောကျဟာ ဝဖေနျတိုကျခိုကျမှုတှကေို သိပျပွီး အလေးမထားပဲ ရှဆေ့ကျသှားနတောတှရေ့ပါတယျ။
ပရိသတျတှေ အခိုငျအမာကိုရရှိထားတဲ့ ဖွိုးမွတျအောငျတဈယောကျကတော့ ရှဆေိုငျပိုငျရှငျ ဇနီးမောငျနှံရဲ့ ဂုဏျပွုခွငျးကိုခံလိုကျရပါတယျ။
အဲဒါကတော့ ရှသေားစဈစဈနဲ့ပွုလုပျထားတဲ့ ဖွိုးမွတျအောငျရဲ့ ပွိုငျပှဲဝငျနံပါတျ7ပုံစံကို ဂုဏျပွုလကျဆောငျခြီးမွှငျ့ပေးခဲ့တာကို Myanmar Beauty Stars ပခြေျ့ပျေါမှာ ယနေ့ ညနပေိုငျးက တငျထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ထိုပို့ဈအောကျမှာတော့ ဂုဏျပွုလကျဆောငျခြီးမွှငျ့ပေးခဲ့တဲ့ ဇနီးမောငျနှံ (၂) ဦးလညျး လာရောကျကောမနျ့ပေးထားတာကို တှရှေိ့ရပါတယျ။
ယခုလိုဖွိုးမွတျအောငျကို ခဈြခငျအားပေးပွီး ဂုဏျပွုခြီးမွငျ့ခဲ့တဲ့အတှကျ ပရိသတျတှကေ ခြီးကြူးသွဘာပေးလြှကျရှိနကွေတာကိုလညျး အဆိုပါ ပို့ဈအောကျမှာတှရေ့ပါတယျ။
ဖွိုးမွတျအောငျကို ဂုဏျပွုလကျဆောငျခြီးမွငျ့ပေးခဲ့တဲ့ ဇနီးမောငျနှံရဲ့ အမညျတှကေတော့ ကိုကြျောသူထိုကျ နဲ့ မမို့မို့ ပဲဖွဈပါတယျ။ သူတို့ဇနီးမောငျနှံကတော့ ခရမျးသုံးခှစိနျရှရေတနာဆိုငျကို မွောကျဒဂုံ၊ ပငျလုံလမျးမပျေါမှာဖှငျ့လှဈထားရှိတာဖွဈပါတယျ။
ဖွိုးမွတျအောငျပရိတျသတျတှရှေိရငျလညျး Share ပေးကွပါဦးနျော
ရေကာတာကျိုးပေါက်နိုင်၍ အရေးပေါ်ကြေညာချက် ထုတ်...
TV မှာ ကြေညာနေပြီ
ပဲခူး တာကျိုးနိုင်ပြီ တဲ့(တာကျိုးနိုင်ကြောင်း အရေးပေါ် ကြေညာ)
ပဲခူး မဒေါက် မှာ ဖြစ်၏
နီးရာ ကုန်းမြင့်သို့ သွားကြပါ
ပဲခူးတိုင်း၊ မဒေါက်မြို့မှာ စစ်တောင်းရေကာတာ ကျိုးပေါက်နိုင်တာကြောင့် ရွှေငွေပစ္စည်းတွေကို အဆင်သင့်သိမ်းထားနိုင်အောင်၊ ကလေးတွေ၊ ကိုယ်ဝန်သည်တွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာ နှိုးဆော်ထားပါတယ်။
ဘားအံ၊ ပဲခူး၊ ရွှေကျင်နဲ့ မဒေါက်မြို့တွေက မြစ်ကမ်းအနီးနဲ့ မြေနိမ့်ပိုင်း နေထိုင်သူတွေ မြစ်ရေကြီးတဲ့ဘေးက ကင်းလွတ်ရာ ရှောင်ရှားကြဖို့ မိုးဇလက သတိပေးထားပါတယ်။
စစ်တောင်း မြစ်ရေဟာ မဒေါက်မြို့မှာ ၅၃ နှစ်အတွင်း အမြင့်ဆုံး၊ ပဲခူးမြစ်ရေဟာ ပဲခူးမြို့မှာ နှစ်ပေါင်း ၅၄ နှစ်အတွင်း အမြင့်ဆုံးစံချိန်တင် မြင့်တက်နေပါတယ်။
မဒေါက်မြို့ ရေကာတာကျိုးပေါက်နိုင်၍ အရေးပေါ်ကြေညာ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်လေးပင်မြို့နယ် မဒေါက်မြို့မှာ စစ်တောင်းရေကာတာ ကျိုးပေါက်နိုင်တာကြောင့် ဇူလိုင် ၂၈ ရက် ညနေပိုင်းက အရေးပေါ်ကြေညာထားပါတယ်။
ရေကာတာနဲ့ အရမ်းနီးနေတာကြောင့် ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ရွှေငွေပစ္စည်းတွေကို အ…
မီးရဲရဲ​ပေါ်. လမ်းဖြတ်​​လျှောက်ခြင်းနှင့် ကမ္ဘာကျော် လိမ်နည်းများ….
မယုံမရှိနဲ့ ။စမ်းကြည့်​ လိမ်​နည်း တွေပါပဲ။ ၁ မီးရဲရဲ​ပေါ်. လမ်းဖြတ်​​လျှောက်​ရန်​ ​ကျောက်​ချဉ်​ရယ်​ သဲဆပ်​ပြာ/​ရွှေဝါဆပ်​ပြာ
မယုံမရှိနဲ့ ။စမ်းကြည့်​ လိမ်​နည်း တွေပါပဲ။
၁ မီးရဲရဲ​ပေါ်. လမ်းဖြတ်​​လျှောက်​ရန်​ ​ကျောက်​ချဉ်​ရယ်​ သဲဆပ်​ပြာ/​ရွှေဝါဆပ်​ပြာ ဆတူ/အမျှ​ဖျော်​ ။လိမ်း။လိမ်းထားတဲ့​နေရာမှန်​သမျှ မီးမဟပ်​ /မီးမပူ ။
၂ ထုံးကို အရုပ်​စုံ ထုလုပ်​ထား ။ ကျီးကန်းသည်း​ခြေကို ကြိမ်​လုံးထိပ်​ သုတ်​လိမ်းပြီး ထုံးရုပ်​ကို တို့လိုက်​တာနဲ့. မီးထ​တောက်​၏ ။
၃ နှင်းဆီပန်းကို အညှာဖြုတ်​ ။ အပ်​နဲ့. အပ်​ချည်​ကိုပြဒါးစိမ်​ ။ တွဲလျှက်​သား အပ်​ချည်​ပါ အပ်​ကို ပန်းဖင်​မှာထိုးထား ။
ပန်းထိပ်​ကို ပြဒါးသုတ်​ ။ အ​ပေါ်က. ​ကြေးလင်​ပန်း ထား တီးကြည့်​ ။ ထိုပန်း ထကမည်​ ။
၄နို့ဆီဗူးက်ို အ​ပေါက်​မ​ဖောက်​ဖဲ ကုန်​တာဟာ နတ်​ဘုရားတန်​ခိုး ​ကြောင့်​မဟုတ်​ပါ ။ ပြဒါး​ကြောင့်​ပါ ။
သံနဲ့. ပြဒါး ဓာတ်​ပြုမြဲမို့. သုတ်​လိမ်းထားပြီး များမကြာမှိ ပူလာပြီး အ​ငွေ့အဖြစ်​​ပြောင်းလဲသွာသဖြင့်​နို့ဆီများ ​ပျောက်​သွားတတ်​ပါသည်​ ။
ဂူအတွင်း ဂူအခန်းအမှတ်(၃)မှနောက်ထပ်ပေ၆၀၀ ကျော် ခန့်သို ( Seal ) အထူးရေငုပ်အဖွဲ့များရောက်ရှိသွားပါပြီ ။
ထို့အတူ ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် အပေါ်အထက်ဂူပေါက်(၂)ပေါက်မှအောက်ခြေဂူအတွင်းရှိ အထူးရေငုပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဆက်သွယ်မှုများရရှိခဲ့သဖြင့် ရိက္ခာများ ၊ သောက်ရေများ ၊ အင်အားများဖြည့်တင်းလျှက်ရှိနေပါပြီ ။
အကယ်၍ကလေးများကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါက ဂူအတွင်းမှမခေါ်ထုတ်နိုင်သေးခင်လိုအပ်သည့် ခန္ဓာကိုယ်ကျမ္မာကြံ့ခိုင်မှုများရှိရန်အဓိကဖြစ်ပြီး ...
အထူးရေငုတ်အဖွဲ့များမှ ( Dive Doctor)နှင့်အတူ အောက်စီဂျင်ဗူးများကို ၇၅ ပေအကွာတိုင်းတွင်အဆင်သင့်ချထားရန်ပြင်ဆင်နေကြောင်း ၊ ယခုအထိမိုးများမရွာသွန်းခြင်းကြောင့် သတင်းကောင်းများမကြာခင်ကြားရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်..။
ဂူအတှငျး ဂူအခနျးအမှတျ(၃)မှနောကျထပျပေ၆၀၀ ကြျော ခနျ့သို ( Seal ) အထူးရငေုပျအဖှဲ့မြားရောကျရှိသှားပါပွီ ။
ထို့အတူ ရဟတျယာဉျဖွငျ့ အပျေါအထကျဂူပေါကျ(၂)ပေါကျမှအောကျခွဂေူအတှငျးရှိ အထူးရငေုပျတပျဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ ဆကျသှယျမှုမြားရရှိခဲ့သဖွငျ့ ရိက်ခာမြား ၊ သောကျရမြေား ၊ အငျအားမြားဖွညျ့တငျးလြှကျရှိနပေါပွီ ။